Mon, Jul 23, 2018 | 01:45:16 NST
13:59 PM (7months ago )
Total Views: 74.4 K
काठमाडौं, पुस १४ –ढिलोचाँडो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदैछ ।
चुनावी नतिजाले नै दुई पार्टीलाई एकतामा बाँधिसकेकाले यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था अब छैन । जुन तथ्यलाई दुवै दलका नेताहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्थात पार्टी एकता गर्न दुवै दलका नेता, कार्यकर्ता आतुर छन् । तर एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को बन्ने तथा वैचारिक र सांगठनिक संरचनालाई कसरी मिलाउने भन्ने विषय टुंगोमा नपुग्दा नेता कार्यकर्तामा उत्तिकै अन्यौल पनि छ ।
अन्योल बढ्दै जाँदा अनेकथरी आशंका पनि जन्मिरहेका छन् । दुई पार्टी एक हुन्छन् र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार देशमा आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्छ भन्ने आशमा वामपन्थीलाई बहुमत दिएका मतदाता निराश छन् । कतै दुई पार्टी नमिल्ने हुन् कि, फेरि अस्थिर सरकार बन्ने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा छ ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको पछिल्लो भेटले आशंका केही हदसम्म कम गरेको छ ।
दुई शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको खाका तयार पार्न नेताहरु कसरतमा जुटेका छन् । ओली र प्रचण्डमध्ये एकलाई अध्यक्ष बनाउने या दुवैलाई सहअध्यक्ष बनाएर महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भन्ने विषयमा बहस भैरहेको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएमा प्रचण्डलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो भए पनि एमालेका कतिपय नेताहरु यसको विपक्षमा छन् । यसले पार्टी एकताको खाका तयार हुन अझै ढिलो हुने देखिएको छ ।
प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न किन अप्ठेरो ?
एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बन्ने, अनि नयाँ सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने लगभग पक्का जस्तै भैसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै नागरिकको आशाअनुसार काम थाल्ने ओलीले योजना पनि बनाइसक्नुभएको छ । ओलीलाई अघि सार्न माओवादी पनि तयार छ ।
प्रधानमन्त्री चाहिँ आलोपालो हुने कि नहुने ?
गएको असोजमा दसैंको टीकालगत्तै अकस्मात बाहिर आएको एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रयास दुवै दलका धेरै नेतालाई थाहा थिएन । मिलेर चुनाव लड्ने र चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति बलियो भएपछि मात्र एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे आआफ्नो पार्टीमा बिफ्रिङ गरेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच भएको सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘चुनावपछि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने’ उल्लेख थियो । तर पार्टी एकताबारे घोषणा गर्ने बेला त्यो बुँदा सार्वजनिक भएन । यो बुँदा सार्वजनिक नहुँदा सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा दुवै दलका नेताहरु प्रष्ट छैनन् । तर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुने प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
प्रचण्ड र माओवादीका अरु नेताहरुको भनाई अनुसार ओलीले अढाई वर्ष मात्रै सरकार चलाउने हो । त्यसपछि प्रचण्डको पालो आउँछ । अर्थात पहिले ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र ओली अध्यक्ष हुनेगरी सहमति भएको हो ।
यदि सरकार आलोपालो गरेर चलाउने हो भने यसलाई कसरी स्थिर भन्ने ? चुनावपछि स्थिर सरकार बन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आमनागरिकको चाहनामा ठेस लाग्ने भयो नि ? भन्ने प्रश्न र चिन्ता धेरैले गर्न थालेका छन् ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुई पार्टी एक हुने हो भने प्रधानमन्त्री जे जसरी मिलाउँदा पनि फरक पर्दैन । एमाले र माओवादीले सरकार चलाउँदा चुनावको बेला सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र अनुसार काम हुने हो ।
संयुक्त घोषणापत्रमा नयाँ सरकारले के के गर्छ र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने सबै कुरा लेखिएका छन् । घोषणापत्रमा समावेश यी योजना र प्रतिबद्धता ओली र प्रचण्ड दुवैको हो ।
प्रधानमन्त्री भैसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा अरु योजना र भिजन पनि बन्लान् । तर यसलाई लागू गर्ने बेलामा त पार्टीभित्र आवश्यक छलफल हुन्छ । अनि पहिले ओली र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला हुने काममा फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन ।
अर्थात पार्टी एक भैसकेपछि सुरुको अढाई वर्ष ओली र त्यसपछिको अढाई वर्ष प्रचण्डले आलोपालो गरेर सरकार चलाउँदा त्यसलाई अस्थिर भन्न मिल्दैन । एउटै पार्टीले सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्दा अहिले चिन्ता गरेजस्तो अस्थिरता आउँछ भन्ने हुँदैन ।
हो, पहिले एउटा पार्टी र त्यसपछि अर्को पार्टीको नेतृत्व हुँदा सरकार अस्थिर हुन्छ । तर पार्टी एउटै भएपछि त्यही पार्टीको योजना र चुनावी घोषणापत्र अनुसार सरकार सञ्चालन हुन्छ भने व्यक्ति फेरिंदैमा अस्थिर कसरी हुन्छ ?
दुई पार्टीबीच इमान्दारीपूर्वक एकता हुने र जनभावना अनुसार अघि बढ्ने हो भने ओली र प्रचण्डले सरकार र पार्टी अध्यक्षमा आलोपालो गर्दा फरक पर्दैन । उल्टो दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र वामपन्थीलाई भोट दिने मतदाताको विश्वास बलियो हुन्छ ।
दुवैलाई मान्य हुनेगरी वैचारिक र सांगठनिक संरचना मिलाएर पार्टी एकता भएपछि स्थिर सरकारको ढोका खुल्छ । अनि पहिलो अढाई वर्षमा प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्को अढाई वर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पार्टी अध्यक्ष ओली भन्न अहिलेका एमाले नेता कार्यकर्तालाई पनि अप्ठेरो हुँदैन ।